Page 2 Keessaa 98
...tti maxxanfame 6:19 3 Ebla 20206:19 3 Ebla 2020
Qophiin weerara koronaavayirasii Oromiyaa maal fakkaata?
Wiirtun qorannoo Koronaavaayiras magaalaa Adaamaa har'a ykn boru tajaajila kennuu ni eegala jedhame hogganaan Biiroo Eegumsa Fayyaa Oromiyaa.
...tti maxxanfame 4:53 3 Ebla 20204:53 3 Ebla 2020
'Waan fudhachuu hin dandeenye akka fuudhannuuf dhiibbaan nurratti taasifamaa ture'
Waltajjiin marii Hidha Guddichaa Waashingitaniitti gaggeefamaa ture, kan Itoophiyaarratti dhiibbaa taasisee garuu Masriif kan loogu akka ture himama. Marii Suudaan, Masiriifi Itoophiyaa jidduutti gaggeefamaa ture maal akka fakkaatu, Ministirri Hajaa Alaa Itoophiyaa BBC waliin turtii taasiisan dubbifadhaa.
...tti maxxanfame 4:44 3 Ebla 20204:44 3 Ebla 2020
Itoophiyaa - namooti dabalataa jaha COVID19'n qabamuun mirkanaa'e
Sa'aatii 24 darban qorannoo namoota 74'f taasifamee keessaa namoonni jaha vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'eera jedhe Ministeerri Fayyaa.
...tti maxxanfame 10:04 2 Ebla 202010:04 2 Ebla 2020
Magaalaa Adaamaatti abbaan qabeenyaa tokko hoteela abbaa darbii saddeetii gara Hospitaala Riferaalaa Koronaavaayirasiin itti yaalamuutti jijjiiruuf murteessan.
...tti maxxanfame 9:09 2 Ebla 20209:09 2 Ebla 2020
Sababa Koronaavayirasiitin tibbana biyyoota addunyaa maratti muddama humee jiru kanaatiin dinagdeen Itoophiyaa qormaata cimaa keessa seenuu akka danda'u hayyoonni dinagdee BBC'tti himan.
...tti maxxanfame 4:49 2 Ebla 20204:49 2 Ebla 2020
Itoophiyaan sa’aatii 24 darbe 65 qorattee hunduu COVID-19 irraa bilisa ta’an
Inistitiyuutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa sa’aatii 24 darbe qorannoo laaboraatorii namoota 65 taasisuus nama koronaavaayirasiin qabame hin arganne jedhe. Lakkoofsi warra Koronaavaayirasiirraa bayyanatanii 3 gaheera.
...tti maxxanfame 16:09 1 Ebla 202016:09 1 Ebla 2020
Magaalaa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa, akkasumas wiirtuu diinagdee naannichaa ka taate magaalaa Moyyaleetti qaamolee nageenyaa Keeniyaafi Itoophiyaa gidduutti walitti bu'insi uumamee akka ture BBCn mirkaneesseera.
...tti maxxanfame 13:09 1 Ebla 202013:09 1 Ebla 2020
Murtee Boordii Filannoo Biyyaaleessaa Irratti Paartileen Siyaasaa Maal Jedhu?
...tti maxxanfame 12:22 1 Ebla 202012:22 1 Ebla 2020
Koronaavaayiras: Namoonni 'matta'aadhaa' bakka itti adda baasanii tursiisan keessaa bahan jiru?
...tti maxxanfame 4:52 1 Ebla 20204:52 1 Ebla 2020
Sa'aatii 24 darban keessatti qorannoo namoota 68'tiif taasifameen namooti sadi dabalataan vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'uu Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa beeksise.